« Fanovana goavana » -
AccueilTresaka« Fanovana goavana »
« Fanovana goavana »
10/07/2018 admintriatra Tresaka 0
Nampitsangam-bolo ny fahenoana ny fanamarihana nentin’ny Dr Lafy Roger Razafindrakoto, tale eo anivon’ny antokon-draharaha Nasionaly misahana ny toeram-pitsaboana eo anivon’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, fa misy amin’ireny klinika tsy miankina na toeram-pitsaboana tsy miankina eto amintsika ireny no tsy manana fahazoan-dalana hanao ilay asa fitsaboana akory, ka tsy maintsy hanaovana fanaraha-maso manokana sy hosaziana manomboka izao. Misy koa ny toeram-pitsaboana tsy miankina sasany mampiasa fitaovam-pitsaboana saro-pady, kanefa tsy manana mpiasa manana fahaiza-manao hampiasa izany. Ny sasany aza moa tsy manana fahazoan-dalana handidy kanefa manao izany asa izany, hoy ity tompon’andraikitra ambony ity.
Tena mampatahotra izany fanamarihana nentin’ity tompon’andraikitra ity izany. Any amin’ny sehatry ny fitsaboana avy ve dia hanaovana tandrevaka tahaka izany? Ain’olona maro no iantohan’ireny toeram-pitsaboana ireny na miankina izy na tsy miankina, ka tsy azo ekena mihitsy ny fandikan-dalàna manodidina azy. Nahoana anefa no aty amin’ny volana jolay 2018 vao mamoaka izany fanamarihana goavana izany ny tompon’andraikitra eo anivon’ity antokon-draharaha ity ?
Lasibatry ny gaboraraka ihany koa araka izany ny sehatry ny fitsaboana ka tokony hilana fanovana goavana manomboka eny ifotony. Raha tsy mandrangaranga sazy tahaka ny hataon’ity tompon’andraikitra avy amin’ity antokon-draharaha ity izany tsy ho tonga saina mihitsy ireny toeram-pitsaboana manaotao foana ireny.
Tafiditra anatin’ilay sehatra mila fahaterahana vaovao araka ny vinan’ny Fisandratana aroson’ny Filoham-pirenena moa ny fahasalamam-bahoaka, ka inoana fa ho foana tanteraka ireny toeram-pitsaboana tsy miankina sy tsy manara-dalàna ireny kanefa mitango volam-bahoaka. Rehefa hanatanteraka ny fanovana ifotony eo anivon’ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka ihany dia tokony handraisana fepetra ihany koa ny momba ireo mpitsabo mpiasam-panjakana manao asa fanampiny eny anivon’ny hopitaly tsy miankina kanefa tsy mampahafantatra izany amin’ny lehibeny. Lasa ilay hopitalim-panjakana hanakaraman’ny fanjakana azy indray mantsy no mandefitra. Tsy maintsy jerena amin’ny antsipirihany toa izany ny fanarenana ny lafin’ny fahasalamam-bahoaka raha tiana ny hivoatra.
Rossy : Nampihorohoro teny amin’ ny CENI
Ny alin’ny faha-24 ny volana desambra dia tonga nampihorohoro sy nanakorontana teny amin’ny biraon’ny CENI Alarobia indray, ny solombavambahoaka Rahasimanana Paulbert, fantatry ny maro amin’ ny anarana hoe Rossy. Notabatabain’ ity farany avokoa ireo mpanara-maso ...Tohiny
Tetikasa Rocade Atsinanana : Natomboky ny Filoha ny asa fanamboarana
Marc Ravalomanana : Fihodinana faharoa
HVM Analamanga : Nihaona mivantana tamin’ireo fokontany miisa 192